Onye na-edekọ ọdịyo: Ngwa bara uru iji dekọọ ọdịyo ma mee pọdkastị | Site na Linux
Na-eme nchọgharị na ịntanetị ụbọchị gara aga, na-achọ a Free Software na Open Source App nke a ga - eme ka m detuo obere odiyo ka m mee obere pọdkastị abịarutela m bara uru, obere na mfe ngwa a na-akpọ Onye na-edekọ ọdịyo.
O doro anya na ọtụtụ ga-enwe ike ịrụ ụka, ọ dịghị ihe dị mma maka Linux na mpaghara ahụ karịa Ọdịdị. Ebe ọ bụ na Audacity abụghị naanị n'efu ma mepere emepe, ọ na-ejekwa ozi dekọọ ma dezie ụda ederede (ụda). Ọ dịkwa mma maka ịdekọ ọdịyo dị ndụ, ịtụgharị teepu na diski, idezi faịlụ ụda, ịgbanwe ọsọ ma ọ bụ ụda nke ndekọ, yana ọtụtụ ndị ọzọ. Ma, achọrọ m ihe obere mgbagwoju anya na ọkụ, nke ahụ na-enyekwa ya Onye na-edekọ ọdịyo.
Banyere Ọdịdị, na ngwa ndị ọzọ metụtara multimedia n'ọhịa, kpọmkwem na ụda edezi anyị agaghị aga omimi, ebe ọ bụ na nke ahụ, anyị na-akwado ileta ma gụọ nke anyị gara aga metụtara post na-esonụ:
Agbanyeghị, anyị ga-ekwu naanị uzo ozo di na Audacity akpọrọ aha ebe ahụ maka ebumnuche bara uru:
Onye na-edekọ ọdịyo: Open Source Multimedia App
1 Onye na-edekọ ọdịyo: Open Source Multimedia App
1.1 Gịnị bụ Audio edekọ?
Gịnị bụ Audio edekọ?
N’okwu ndị dị mfe ma dị irè anyị nwere ike ịkọwa Onye na-edekọ ọdịyo dị ka:
"Mmemme dị egwu maka ịdekọ ụda (ụda) na kọmputa. Ngwaọrụ a na - enye onye ọrụ ohere ịdekọ ụda site na ngwaọrụ dịka igwe okwu, kamera weebụ, kaadị ụda, yana site na ngwa dịka igwe egwu multimedia ma ọ bụ ihe nchọgharị ,ntanetị, n'etiti ndị ọzọ.".
Onye na-edekọ ọdịyo ugbu a nwere 2 ukara weebụsaịtị na LaunchPad. na mbụ nke nwere oge a kacha arụpụta, site na ụdị nke Ubuntu 20.04 (nke lekwasịrị anya) ruo mgbe dị maka Ubuntu 15.04 (doro anya). Na nke abụọ nke nwere executables dị maka ụdị ndị gara aga, ya bụ, site na Ubuntu 15.04 (doro anya) elu Ubuntu 10.10 (Maverick).
N'ime ha, usoro ntinye dị site na mgbakwunye nke Ebe nchekwa PPAOtú ọ dị, ọ ga-ekwe omume na n'ọtụtụ GNU / Linux Distros a chọta ngwugwu ahụ ma tinye ya na iwu dị mfe site na njikwa ngwugwu njikwa o ngwanrọ maka ihe eserese.
N'okwu nke onwe m, ebe ọ bụ na m na-eji ya MX Linux 19.2 (kpọmkwem a redistributable onwe respin akpọ Ọrụ ebube) na iwu dị mfe dị n'okpuru, enwere m ike ịwụnye ya n'enweghị nnukwu nsogbu:
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi ozugbo n'elu na n'okpuru, na Eserese eserese eserese (GUI) de Onye na-edekọ ọdịyo na ya Ngalaba nhazi ọ dị nnọọ mfe ma kwụ ọtọ. Agbanyeghị, n'etiti atụmatụ na ọrụ nke obere ngwa multimedia a, anyị nwere ike ịkọwa ihe ndị a:
A n'elu ụlọ mmanya ebe enwere bọtịnụ ịmalite ma kwụsị ndekọ nke ọdịyo iji rụọ ọrụ ya na njirimara ọkwa ya.
Akụkụ etiti site na nghazi oge site na ederede iji nweta nsonaazụ dịka: Malite, kwụsị, kwụsịtụ ndekọ na oge enyere ma ọ bụ mgbe oge ụfọdụ.
Akụkụ dị ala maka nhazi Audio ebe ị nwere ike ịgwa ngwa ahụ nke ga-abụ isi mmalite nke ọdịyo (HW / SW) na nke ga-abụ usoro njedebe nke a ga-edekọ ya.
Otu bọtịnụ ala Mgbakwunye ọzọ nke na-enye anyị ohere ịnweta ọnyekwu maka njikwa mma nke ngwa ahụ. Na onye nhọrọ ya nwere ike ịhụ n'okpuru n'okpuru onyinyo dị ala.
Dị ka ị nwere ike ịghọta Onye na-edekọ ọdịyo Ọ bụghị maka ọkachamara iji ma ọ bụ na-achọ elu àgwà ụda edezi dị ka Ọdịdị, ma maka ọrụ dị mfe ma rụọ ọrụ dịka obere podcast ọ pụrụ ịbụ ihe na-enye aka.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ngwa multimedia «Audio Recorder», nke dị mfe ma baa uru, n'etiti ọtụtụ akụkụ ya, ya bụ, ịrụ ọrụ dị mfe ndekọ ọdịyo na kọmputa ọ bụla na ọbụna ịrụ dị mfe podcast; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Audio edekọ: Bara uru ngwa ka ịdekọ ọdịyo ma mee pọdkastị
A tọhapụrụ PowerDNS Recursor 4.4, mara akụkọ ya